Maamulaha webka agoonta.net ayaa mar uu booqasho ku tegay magaalada B/weyne wuxuu soo booqday Xarunta Agoonta Ugaas Khaliif ee ku taala magaalada B/weyne, wuxuuna halkaas kula soo kulmay agoonta ku jirta xarunta, Maamulaha xerada agoonta, Macallimiinta iyo dhammaan inta ka howl gasha xaruntaas.
Haddaba waxaa u suurta gashay inuu si dhab ah u ogaado baahida ka jirta halkaas ee u baahan in deg deg wax looga qabto isagoo soo uruuriyay macluumaadkaas, mid mid iyo koox kooxna ula sheekeystay agoonta oo uu ka dareemay iney ku dheertahay ama ay si aad ah uga warqabaan in walaalaha muslimiinta ah ee qurbaha joogga rag iyo dumar ay yihiin kuwa ku dadaala xannaanadooda iyo sidii ay mustaqbalkooda u gaari lahaayeen, mar walbana wixii ay u awoodaan lasoo gaara.
Wuxuu dhex galay oo uu fiiriyay qolalka jiifka, sidoo kale fasalada ay wax ku bartaan, dugsiga Qur'aanka kariimka, kushiinka ama jikada cuntada loogu kariyo iyo musqulaha ay isticmaalaan intaba, runtii dhammaan goobahaasi ma xumeyn nadaafadoodu, Ilaah baa mahaddaas iska leh, intii gacan ka geysatayna Ilaaheey ha ka abaal mariyo.
Mar ay indhihiisu qabteen baahi qof walba dareemayay oo ahayd iney intooda badan ka aradnaayeen kabaha oo aysan haysan kabo wanaagsan, ayaa waxay nasiib u helaan inuu walaal ka mid ah walaalaha kaalmeeya uu ducadaas faraqa ku qaato isagoo u dalbay dhammaantood kabo isku mid ah oo ay uniform-ka (dharka iskoolka) ku qaataan, kabahaas oo dhawaan soo gaaray Xarunta Agoonta Ugaas Khaliif ee B/weyne (XAU), waxaadna hoos ka arki doontaan dhammaantood iyagoo gashan kabihii iyo dharkii iskoolka.
Walaal Alle (SW) ayaa kuu gar gaarayee u kaalmee agoonta oo ka qeyb qaado sidii ay u noqonlahaayeen kuwo wax istara berrito, adigana aad ajarkeeda leedahay insha'allaahu tacaalaa.
Wixii talo iyo tusaale ah ugu soo hagaaji E-mailada kala ah: agoonta@agoonta.net ama kaafil@agoonta.net
Copyright © 2007-2011, All Rights Reserved toagoonta.net , Designed by XasanC. Xuuriye